ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေ တိုက်ခိုက်ခံရရင် ဘယ်တော့မှ မဖြေရှင်းဘူး - Celebrities 8DaysaWeek - Journal
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေ တိုက်ခိုက်ခံရရင် ဘယ်တော့မှ မဖြေရှင်းဘူး
18 February, 2019, 11:56 AM
ဒီတစ်ပတ် 8days ရဲ့ Cover Star ကတော့ သမ္မတကြီးထံပေးစာ မှာမျက်နှာသစ် သရုပ်ဆောင်တစ် ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်အသိအ မှတ်ပြုခံခဲ့ရတဲ့ ချစ်မင်းရဲထွဋ် ကို ယခု တစ်ပတ်ရဲ့ Cover Star အ ဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
Q . Brand တွေဝတ်ရတာ ကြိုက်လား။
A . Brand တွေဝတ်ရမှ မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်ပြီး Smart ကျတဲ့လူငယ်ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုး တွေ သဘောကျပါတယ်။
Q. ကိုယ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ သမ္မတကြီးထံပေးစာ၊ည ရုပ်ရှင် တွေ ဆက်တိုက် ရုံတင်ခဲ့ရတဲ့ခံစား ချက်။
A . ပရိသတ်အားပေးတာမြင် ရတော့ ကျွန်တော်အရမ်းပျော် တယ်။ သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တယ် ဆို တာငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန် တော်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့အိပ်မက်။ ကျွန် တော်ကြီးလာရင် ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်။ ကျွန်တော့် ရုပ်ရှင်တွေ ပရိသတ်တွေ ကြည့်စေချင်တယ်။ ခု အဲဒီအိပ်မက် လေးဖြစ်လာတာပေါ့။ ကျွန်တော် ရှေ့လျှောက် ဒီထက်အများကြီး ပိုကြိုးစားရမယ်။
Q . ကိုယ့်ရဲ့အိပ်မက်အတွက် ဘယ်လောက်အားစိုက်ရလဲ။
A . အားစိုက်ရတာပေါ့။ ကျွန် တော် ဒီအခွင့်အရေးကို ဘယ်လိုရမ လဲ၊ ရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန် တော်ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။ ကျွန်တော့်ကို အခွင့်အရေးပေးတဲ့ သူတွေကို ကျွန်တော့်ဘက်က ဘယ်လိုပြန်ပြီး လုပ်ပေးနိုင်မလဲ အမြဲလေ့လာပါတယ်။
Q. ကိုယ့်ဇာတ်ရုပ်တွေ အ တွက် ဘယ်လိုပြင်လဲ။
A . သမ္မတကြီးထံပေးစာ၊ ည မှာ ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်ပေါ့။ ကံ့ကော်နီ မှာကျတော့ သာမန်ကျောင်းသား ဇာတ်ရုပ်ပေါ့။ ဇာတ်ရုပ်တွေ အတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ ဒါရိုက်တာ ဆရာပြောတာတွေသေချာ လေ့ လာပြင်ဆင်ပါတယ်။
Q . ဇာတ်ကားတွေ ရုံမတင်ခင် ဝေဖန်ခံရမှုအပေါ်မှာရော...
A . အဓိက ပရိုဂျူဆာနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်။ ပရိုဂျူဆာက သူသဘောကျ တဲ့ သရုပ်ဆောင်နဲ့ပဲ ရိုက်မှာပဲ။ ကျွန်တော်ရိုက်လာခဲ့ရတဲ့ ဒါရိုက်တာ တွေကတော့ ဘယ်လိုမှလက်လွတ် စပယ်လုပ်ထားတာ ဘယ်သူမှမရှိပါ ဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုလည်း သေသေ ချာချာ သရုပ်ဆောင်တာလေ။ ပေါ့ ပျက်ပျက် သရုပ်ဆောင်ထားတာ မဟုတ်လို့ ပရိသတ်ကြည့်မိရင် ကျေ နပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပရိသတ်က တော့ ဝေဖန်မှာပါပဲ။ ဝေဖန်ခွင့် လည်းရှိပါတယ်။ ဝေဖန်ပေးတဲ့ သူတွေကိုလည်းသဘောကျပါတယ်။ အဲဒီဝေဖန်မှုတွေကို သဘောကျပါ တယ်။
Q . Social Media ပေါ်မှာ အမှတ်တရ ဖြစ်စေတဲ့ Comment များရှိလား။
A . အဲ့ဒီလိုတော့မရှိပါဘူး။ ပရိသတ် တော်တော်များများက ကျွန်တော့်ကို ချစ်ကြတာများတယ်။ အားပေးစကားများတယ်။ ဆိုးဆိုး ရွားရွား Comment မျိုးတော့ မကြုံ ဖူးပါဘူး။
Q . Personal တိုက်ခိုက်မှု တွေအပေါ်ဘယ်လို တုံ့ပြန်လဲ။
A . ကျွန်တော့် ကိုယ်ရေးကိုယ် တာကိစ္စတွေကိုဘယ်တော့မှ ဖြေ ရှင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေက အချိန်တစ်ခုရောက်ရင် ကွယ် ပျောက်သွားမှာပါပဲ။ ဖြစ်ပြီးတဲ့အ ကြောင်းအရာတွေ သိပ်မဆန်းဘူး။ ကျွန်တော့်အလုပ်ကိုပဲ အာရုံစိုက် ထားပါတယ်။
Q . ကိုယ်လျှောက်မယ့်လမ်း အတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲ။
A . ကျွန်တော့်ကိုငှားလာတဲ့ ဇာတ်တွေမှာ ဇာတ်ရုပ်တွေကို ပီပြင်အောင် ပရိသတ်ကို ဘယ်လို ဖျော်ဖြေမလဲ အဲ့ဒါပဲစဉ်းစားတယ်။ ကျွန်တော် ရုပ်ရှင်တွေအများကြီး ရိုက်ရအောင်ကြိုးစားမယ်။လာငှား တဲ့ဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ် ဆောင်နိုင်ဖို့ပဲ ကြိုးစားမယ်။
Q . ဘာကြောင့်မင်းသား ဖြစ် ချင်ခဲ့တာလဲ။
A . ဒါ ငယ်ငယ်ကတည်းက အိပ်မက်။ ကင်မရာရှေ့မှာ သရုပ် ဆောင်ရဖို့ဆိုတာက ငယ်ငယ်က တည်းက စိတ်ကူးအိပ်မက်တစ်ခု။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုလည်း မိဘက စိတ်ခွန်အားပေးတယ်။ကျွန်တော် စိတ်ဓာတ်ကျအားငယ်နေရင် အမေ နဲ့ ဖုန်းပြောလိုက်ရင်၊ မိသားစု နဲ့ဖုန်း ပြောလိုက်ရင် အမောတွေပြေသွား တယ်။